Kubaluleke kangakanani iminyaka yobudala ye-SEO?
Ingabe kukhona ukulungiswa kwangempela phakathi kweminyaka yobudala ethile ne-SEO ukusebenza kahle ekuthuthukiseni i-Google? Lo mbuzo mayelana ne-Search Engine Optimization nokuthi ungaqondaniswa kanjani nosuku lokubhalisa kwesizinda kuyindaba ebalulekile, evame ukuxoxwa yi-webmasters wezobuchwepheshe, kanye nabanikazi bebhizinisi abaningi be-intanethi.
Ngokuvamile, imboni yezimboni ziphetha ngokuthi iminyaka yesizinda kanye nemiphumela ye-SEO ngandlela-thile isebenza ngesandla. Ngokuzenzakalelayo, imibono yabo yamanje mayelana nokuthi i-domain yobudala obukhulu kangakanani ye-SEO, ihluke kakhulu, nakuba iqhubeka yenza umqondo ngendlela yawo:
isizinda seminyaka asinethonya kwi-SEO, ngakho-ke ku-Google
isizinda sesizinda siyisici esisodwa phakathi kwezinkulungwane eziningi zezinye izimfanelo ezifakwe ku-Google's yobuchule bokuhlelwa kwezindawo
yobudala besizinda lidlala indima ebaluleke kakhulu ekuthathe isikhundla esiphakeme kuma-SERPs
Futhi, nansi amaphuzu amabili abalulekile ngemuva kwengxoxo yamanje mayelana nobudala besizinda kanye ne-SEO:
ecabangela logizi olusetshenziswa abakwa-spammers ukubeka izizinda ezintsha ebhalisini bese uphonsa ngokushesha, amagama asanda kubhaliswa avame ukusetshenziswa ngamawebhusayithi okugaxekile
nge-logic ephindaphindiwe, igama lesizinda elidala lisho ukuthi iwebhusayithi ihle futhi ifanele, njengendlela efanele -bakhululekile baqhubeka besebenzisa izizinda ezifanayo iminyaka
Yebo, sibona ukungaqiniseki okuningi lapha. Kodwa into eyodwa engikwazi ukukutshela ngokuqinisekile - yobudala besizinda kubalulekile lapho kucatshangwa nalabo abanakho. Ngisho ukuthi uma umnikazi wesizinda athola isimo eside futhi esihlanzekile kumarekhodi e-Google, ngeke kukulethele umthelela omubi, uma unquma ukuthenga igama lesizinda elisesele futhi elisetshenzisiwe kakade. Ngakolunye uhlangothi, noma kunjalo, kunezindawo eziningi "ezimbi", ngaphambili ezaziwa ngokuthi ugaxekile noma ziphinde zalahlwa yi-Google esikhathini esithile ngaphambi.
Ukuvimbela inkambo enhle yezenzakalo ukuthi ingenzeki, ochwepheshe batusa ukucabangela kuphela lezozindawo ezidayiswayo, okuthola ulwazi lomphakathi olutholakala. Yebo, abakwa-scammers bangase babe nokuvikeleka kwangasese, isibonelo ngemibuzo ka-Whois, kufanele ngivume. Noma kunjalo, lokho ngokuqinisekile kuzoletha ukusola okuzungezile.
Ngaleyo ndlela, ngincoma ukuba ube nesheke elibili lesikhathi sesizinda nomlando walo ngaphambi kokwenza isivumelwano. Futhi kunezinhlaka eziningi eziwusizo ezitholakalayo ekufinyeleleni okuvulekile ukuhlola lapho igama lesizinda lesinye libhaliswe. Isibonelo, ungazama ithuluzi le-Netcraft ukuthola ukuthi ngabe isizinda sinikelwe yi-Google ukukhwabanisa kubokuqala. Ukwenza kanjalo, ungabona amagama e-domain athembise kakhulu anqunywe njengokwethenjelwa, njengoba anikezelwe imiphumela yabo yekhwalithi ehlala njalo, ngakho-ke ihlelwe kahle kuma-SERPs.
Qaphela, noma kunjalo, isiphakamiso sami asisho ukuthi igama lesizinda elisanda kudala lizolahlekelwa impi ngokumelene nabancintiswano abadala, ngakho-ke kungenzeka ukuthi kunomthelela obuthakathaka ukukhuphukela phezulu emiphumeleni yokusesha. "Umuntu omdala igama lesizinda onalo, indawo ephezulu oyothola" - leyo ayikwazi ukuba yi-100% isebenza noma kunjalo. Hlala ukhumbula, ukuthi isikhathi semisebenzi emihle sithinta igunya lesizinda, kufanele sivume. Ngemuva kwakho konke, noma kunjalo, iminyaka yobudala ne-SEO isengakwazi ukubeka i-website ibekwe ngendlela yayo, kokubili okuhle nokubi Source .